QAABKA ISKU SHAANDHYNTA SHAQAALAHA MID HABOON MA YAHAY? | Dhaymoole News
QAABKA ISKU SHAANDHYNTA SHAQAALAHA MID HABOON MA YAHAY?
Bedelka, eriga iyo dalacaadda shaqaalaha waxay ka timaadda marka la qiimeeyo shaqada uu hay’adaasi ka hayo xubinta mutaystay. Qiimayntaasi waxay ku kaydsan tahay faylka xubinta shaqaalaha oo muujiyana dhamaan taariikhada shaqo ee uu leeyahay sida shaqo qoridiisa (recruitment) , aqoontiisa, akhlaaqdiisa iyo waayo araganimadiisa shaqo. Kaydintaa macluumaadkan waxa u xil u saaraan waaxda shaqaalaha (Human resources) waana in waaxdaasi uu madax ka yahay qofka muhiim, oo aqoon u leh (HR). Waxaana faylkaasi laga daalacan karaa taariikhd wanaag, waxqabad ama xun ee xubinta.
Masuulku marka uu doonayo inuu talaabooyin isbedel ka qaado shaqaalaha waa inuu ugu horayn fayalshooda wada akhriyaa, oo ka baaraandeegaa, isla markaana isla barto magaca faylka iyo xubinta shaqaalaha leh.
Waana inuu la kulmaa dadka uu doonayo inuu xil u dhiibo iyo kuwa uu doonayo inuu ka bedelo. Isagoo saarayaa halbeeg ilaa heerka uu fikirkoodu gaadhsiisan yahay iyo masuuliyadda uu rabo inuu u dhiibo ama ka bedelo, waxa uu ka fahansan yahay. Iyo inuu weliba wax ka weydiiyo macluumaadka faylkiisa ku kaydsan si uu hubiyo inuu og yahay kaydka faylkiisa iyo wixii khariban ee ku jira inuu qirsan yahay.
Ka dib la tashi wuu samayn karaa gaar ahaan la taliyaha iyo xataa xubnaha madaxda ah. Markaa go’aankaasi wuxu noqonayaa mid wax ku ool ah oo faa’iido leh, masuuliyiin siman oo aad badhna la tashato, badhna ka tashato maaha mid sax ah, waxayna tilmaamaysa heerka masuuliyadda maamul oo aad u hoosaysa ama dano kaleba laga leeyahay.
Xoogga shaqaale (Human being) waa hanta qaali ah oo haddii ay niyadooda iyo nidaamka shaqadooda ay hoos u dhacdo keenaysa in wax soo saar kastaa uu ku dhamaado eber.
Marka danta guud ka horaysa tan gaarka ayuu horumarkuna yimaadda.
Axmed Ali (PG/ B. Management)